DHAMMAAN UJEEDADA AZ
150 tan oo culus trailer
Gubashada cyclone-ga loo yaqaan 'Biocomb cyclone burner'
Yaxaasyada Aan Fidnayn
Dorman mashiinka naaftada
Ingiriis London Taksi
Quudiye kaligiis ah
Booqday Furfuran oo wanaagsan
FL Smidth 150 tan saacaddiiba
FL Smidth 500 tan saacaddiiba
Marawaxadaha biyo qaybinta
Jeebka kaydinta oo leh nal dheecaan leh
Golaha Generator ASEA
Shirkadaha matoorrada qaada
Gawaarida gawaarida gawaarida Hyundai HL 780-3A
Gawaarida dareeraha ee Hägglunds
Gawaarida Hawada 5-piston
Dhismaha warshadaha ee Hova
Hanti warshadeed oo ku yaal Lidköping
Haanta saliida awooda
Booqday Hilibka of model ka weyn
Slat feeder leh silsilad
Farqiga rarka la maamuli karo
Suunka gaadhiga yar-yar
Magnet / Scrap Indicator
Rollers quudinta iyo sagxadaha xoqidda
Darawalada gaadiidka farsamada gacanta
Darawalka gaadiidka farsamada gacanta lugaha leh
Moodhankii 270 Gawaarida Naafada Sannadkii 1987
Norba / Wastec xoqid burburin
Warshadda Pellet ee Grums
Qalabka qaboojinta Mouse
Cajiinka quudinta dhirta
Qaabka loo yaqaan magnet
Qaybo ka tufan FL Smidth 150 tan saacaddii
Kala soocaha rarka Jon
Ku-xoqid leh daboolka aan xariiqda lahayn
Tuubada tuubbooyinka qodayaasha
Tiirar bir ah oo deggan
Birta silo 500 kbm
Gaari xamuul ah oo laga soo qaaday Kockum
Qaadista / qaadista geedka cajaladda
Suumanka wax lagu rarto & darfaha caagga ah
Mashiinka weelasha ku dhawaad ​​15 m
Mashiinka weelasha si tartiib tartiib ah loogu qeyliyay
Suunka weelasha oo leh iskeelka
Mashiinka weelasha lagu qaado Möckeln
Suunka weelasha daboolan
Suunka quudiyeyaasha / xamuulka
Kuleyl hawo kulul oo gubanaya saliidaha
Gariiriye Vester Åby gariiriye
Kuleylka kuleylka 5 MW
Xirmooyinka Gawaarida ee Norbakross
Winberg's turret safka hore ayaa quudin jiray
AQOONSIGA LAGU SAMEEYO
MILLS / jeexan
XAALADAHA / DHAQANKA
SILO / baaskiil
Hammarkross Hazemag UNIVERSA 2030 Peabody Holmes - duminta xawaaraha sare
Qashinku waa shey adag, waxay leedahay walxo is beddelaya qaab maalin ilaa maalin, meel ilaa meel. Haqab-beelka dhaqaalaha ee noocyada kala duwan ee laga helo guryaha, bulk, qashinka ganacsiga iyo warshadaha waxay si weyn ugu xiran yihiin habka loo adeegsado. Tallaabada ugu horreysa ee ka shaqeynta wanaagsan waa kala goynta wax ku oolka ah.
Mashiinada qashinka ayaa had iyo jeer loogu talagalay in lagu farsameeyo nooc qashin ah oo dhexdhexaad ah, iyo tikniyoolajiyada burburka ayaa had iyo jeer ah tanaasul ilaa xad ah si loogu habeeyo noocyo badan oo qashin ah intii suurogal ah. Tani waa muuqaal gaar ah oo qalab ah oo isku mar wada hawsha guriga iyo qashinka badan isku mar.
UNIVERSA 2030 guryo xoog badan, leh tol leh ayaa lagu furi karaa si habsami leh, taasoo ka dhigaysa mashiinka mid si fudud loogu heli karo adeeg deg deg ah. Qolka UNIVERSA waxaa loogu talagalay in laga hortago xannibaadda, xitaa marka qaddarka ugu badan ee la oggol yahay in qashin badan uu galo mashiinka.
Qalabka wareegga, wadnaha mashiinka wuxuu galayaa is-hagaajinta kalifayasha roller. Rotor waa dhisme alwaax leh oo si firfircoon isugu dheelitiran oo ku qalabeysan laba saf oo ilko ilko leh, oo lagu hayaa meela ku wareegsan hareeraha rotorka ama si habsami leh ama unugyo si dhakhso leh u sii daaya.
Qalabka lagu rakibay rotor-ka waxaa ka mid ah gorgor ilko oo xirmay, waddo jajabinta iyo shabaggeedii. Xameetadu waxay ku yaalliin laba qaybood, oo si quruxsan loogu dhejiyay trolley. Dariiqa qulqulaya ayaa waliba u noqon kara shabag. Jaranjarooyinka, Jabka jajabinta iyo shabaggeedii ayaa si habsami leh loogu kaxeeyaa goobta shaqada.
Si looga ilaaliyo UNIVERSA waxyeelada ay keenaan walxaha joogtada ah ee qashinka, hoodda gudaheeda waxaa lasiiyaa qabyo. Qaybahaas waxaa tuuray rotor-ka waxayna gaarayaan heesaha bannaanka. Daaha ayaa la siiyaa meesha ugu sarreysa ee shabakadda si looga hortago iftiinka, ashyaa ka go'day mashiinka.
In si isdaba joog ah loo qaybiyo qaybo, warshado, qashin guri ama qashin burburin iwm, ilaa qiyaastii 400 mm, isticmaalka saameynta kaligiis ayaa ku filan. Dariiqa qulqulaya iyo daaqsinta ayaa wali dib loo arkaa.
Qashinka waxaa loo ruxin karaa ilaa 200 mm iyadoo la adeegsanayo dariiqa loo yaqaan 'apron' iyo dariiqa qashinka. Xaaladdan oo kale, grid-gu wuxuu joogsanayaa.
Dhamaan seddexda qalab ee lagu dhejiyo waxaa loo isticmaalaa in lagu habeeyo qashinka guriga, ama noocyada fudud ee qashinka badan oo ay ku jiraan joodariyaal, rooga, alaabada baakadaha iyo taayirrada gawaarida.
Warshad burburin loo adeegsaday. 1980 Waayo
Rotary crusher oo leh qalab jeexan.
Miisaan roor qiyaastii ah 25 tan. 480 rpm Birta adag.
Dhererka wareegga: 3000 mm.
Ballaadhka loo yaqaan 'Rotor wide': 2000 mm.
Isugeynta culeyska unugga burburka waa qiyaastii 100 tan.
Nidaamka lagu ruugi karo dareeraha ee xakameynta jajabinta illaa 10-40 cm.
500 kW motor. Ku buuxi matoor koronto iyo bilow.
Kaliya kaxeeya qiyaastii 1000 saacadood.
Warshaddu waa kala daadatay oo way fududahay inaad u guurto goob rakib ah.
Qalabka dheeraadka ah ayaa la heli karaa, tusaale ahaan -apron.
© 2020 Kinne Maskinteknik AB • Waxaa awood u leh GeneratePress